Valve môtô, valve pneumatic actuator & valve solenoida mpanamboatra
Valve actuator elektrika
Valve lolo elektrika
Valve vavahady elektrika
Valve Globe elektrika
Valve fanaraha-maso elektrika
Valve lolo pneumatic
Valve vavahadin'ny Pneumatic Knife
Valve fanaraha-maso pneumatic
Tanjona ankapobeny Solenoid Valve
Valve Solenoid tsy tantera-drano
Valve Solenoid amin'ny hafanana avo
Valve Solenoid miaraka amin'ny Timer
Valve Solenoida tsy mipoaka
Valve Solenoid 3 fomba
Valve fampihenana ny tsindry
Solika sy entona
Momba ny COVNA
Fahalalana momba ny Valves
Specialist amin'ny Valve Automated
Manolotra vahaolana tokana tokana hamenoana ny filanao
Vahaolana valva mandeha ho azy tokana hamenoana ny filanao.
Vahaolana valva mandeha ho azy tokana hamenoana ny filanao
Manolotra karazana valve actuator rehetra ho an'ny safidinao
COVNA electric actuator valves azo alaina amin'ny baolina / lolo / vavahady / globe karazana valves mba hanomezana ny filanao
Valves pneumatic actuator
COVNA pneumatic actuator valves azo alaina amin'ny fiverenan'ny lohataona sy actuator karazana mihetsika indroa ho an'ny filanao.
COVNA automatique actuator azo alaina amin'ny actuators elektrika sy actuators pneumatic ho an'ny filanao.
Nahoana no misafidy COVNA VALVES?
Mba ho Mpanamboatra Loharanon'ny Valve Actuator
Service Valve Customization
Sampan-draharaha misahana ny fivarotana tokana
Fanohanana ara-teknika sy antontan-taratasy
Amin'ny maha-iray amin'ireo mpanamboatra valva lehibe ao Shina, ny COVNA dia nanizingizina tamin'ny R&D, ny famolavolana ary ny famokarana valves nanomboka tamin'ny taona 2000, ary nanitatra ny andian-tsariny mba hanomezana izay ilain'ny indostria isan-karazany ary manampy ny indostria hamaha ny vahaolana amin'ny fanaraha-maso.
Ho fanampin'izay, manome andiana actuator valve isan-karazany ihany koa izahay mba hanomezana fahafaham-po ny filanao. Ny actuators isan-karazany dia manampy anao hahatsapa ny fanaraha-maso lavitra ary hanatsara ny fahatokisana ny injeniera.
Fantatsika fa indraindray ny valves mahazatra dia mety tsy mety amin'ny fampiharana manokana sasany. Noho izany, manome serivisy fanamboarana valve ho an'ny fampiharana anao izahay mba hahazoana antoka fa ny valvaafaka manolotra vahaolana tsara amin'ny fanaraha-maso ny fluid amin'ny tetikasanao.
Maherin'ny 20 taona ny traikefa valve dia nanampy anay hahatakatra lalina ny filan'ny indostria isan-karazany. Hifantoka amin'ny indostria izahay ary hanome anao vahaolana amin'ny ranon-javatra namboarina. Ny tanjonay dia ny hanampy ny tetikasanao hanatsara ny fahombiazan'ny famokarana sy hanatsara ny drafitra tombombarotra.
Iaraha-mahalala fa maro ny olana sedraina amin’ny fizotry ny fividianana, toy ny fomba fandoavam-bola, lozisialy, fifampiraharahana sy ny sisa. COVNA dia manana traikefa mihoatra ny 20 taona amin'ny varotra manerantany. Ho fanampin'ny fanampiana ny mpanjifa hisafidy valves sy actuators sahaza, dia hiezaka ihany koa izahay hanome ny mpanjifa amin'ny dingana fanaterana vokatra mitsitsy sy mitsitsy.
Amin'izany fotoana izany, manana trano fanatobiana entana 2 ny COVNA, izay afaka mamaly haingana ny filanao valva ary manome serivisy fanaterana haingana.
COVNA dia manana toby famokarana 3 ary trano fanatobiana entana 2. Miezaka manome serivisy fanaterana haingana ny mpanjifa izahay. Mandritra izany fotoana izany, ny ekipa matihanina amin'ny varotrahanampy amin'ny mametraka fandaharam-potoana fividianana ho anao mba hahazoana antoka fa tsy tara ny tetikasanao.
Nanolo-tena izahay hanome anao serivisy tsara. Mba hanampiana anao hahatakatra bebe kokoa ny toetran'ny valva sy ny fampiasana tsara kokoa ny valva, dia hanome anao fanohanana ara-teknika an-tserasera sy fanohanana antontan-taratasy maimaim-poana izahay. Manantena ny hanampy ny tetikasanao handeha tsara.
Ny fanamarinana no fomba tsara indrindra hanaporofoana ny kalitaon'ny vokatra. Manana ISO9001: 2015, CE, SGS, TUV, FDA ary mihoatra ny 30 patanty. Ny dingana famokarana ny vokatra tsirairay dia hanaraka tanteraka ny fenitra iraisam-pirenena.
Miara-miasa amin'ny COVNA
Ankafizo ny serivisyy ary ampio ny orinasanao rocket
Ho an'ny mpampiasa farany sy ny mpiantoka
Antoky ny kalitaon'ny vokatra
Ny fenitra famokarana iraisam-pirenena sy ny fitsapana dia miantoka ny fahombiazan'ny vokatra
Fanohanana ara-teknika hanampy anao hamaha ny vahaolana
Vahaolana amin'ny fluid manokana ho anao
Hifantoka amin'ny filanao izahay ary hanome anao vahaolana namboarina
Ho an'ny Mpizara
Fizarana fampahalalana momba ny tsena
Mizara vaovao momba ny tsena aminao mba hanampy anao hanitarana ny haavon'ny orinasanao
Fanofanana fahalalana momba ny vokatra sy serivisy aorian'ny varotra
Ny fiofanana momba ny vokatra dia manampy anao hahazo ny fitokisan'ny mpanjifa. Ary hamaly haingana izahay hanampy anao amin'ny famahana ny olana aorian'ny varotra
Fanamafisana ny drafitra tombombarotra sy fanohanana ny fahaiza-manao
Vidiny mifaninana hanampy anao hahazo tombony bebe kokoa. Ny fahaiza-mamokatra avo lenta hanampy anao hiantoka ny fitahirizana sy hampaharitra ny orinasanao
Ataovy namboarina tsy misy kaomandy farany ambany ny valves anao.
Trano C, Longchang Micro-Chuangyuan, No. 26 Hantang Street, Dongcheng District, Dongguan, Sina